ဝက်အူ, လက်သည်း, Threads လှံတံ, Anchor Bolt က, ပြင်ဆင်ပြီးသုံး Anchor - Ruiye
WE High Quality စွဲစေသည်
DIN127 သံမဏိနွေဦးအဝတ်လျှော်သော့ခတ်အဝတ်လျှော်ပေါက် ...
Threaded လှံတံ / လုံး Bolt က DIN975
စံ: '5/8 မှ' '6mm, 8 မီလီမီတာ, 10 မီလီမီတာ, 12mm, 16mm ... သို့မဟုတ် 6/15' 'တာရှည်: DIN975 / BSW စံ / ASTM စံအချင်း 1meter, 2meters, 3meters ... Surface က finish ကို: ဇင့် / လွင်ပြင်အရောင်
DIN125 DIN436 အဝတ်လျှော်
ကာဗွန်သံမဏိ / stainless နှင့်အတူကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ ...
Black ကဖော့စဖိတ် Bugle ဌာနမှူး Drywall ဝက်အူ
ဦးခေါင်း: Bugle ခေါင်းကို / Flat ခေါင်းကိုပစ္စည်း: Q195 / C1022A Size: ST3, ST3.5, ST4.2, ST4.8, ST5.5, ST6.3 ... Length: 13mm-100mm (စိတ်ကြိုက်) အရောင်: အနက်ရောင် / မီးခိုးရောင်ဖော့စဖိတ်
ကာဗွန်သံမဏိက Black ပန်းကန် slot နွေတံသင်ဃ ...
စက်ရုံထုတ်လုပ်သူကာဗွန်သံမဏိအဝါရောင်ဇင့်3...
Size: M6-M12 အရွယ်အစား avaliable, စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားအရောင်လက်ခံခဲ့သည်: အဝါရောင်သွပ်သို့မဟုတ်အဖြူဇင့်အဆင့်: 4.8 တန်း Pack: အိတ်ထုပ်ပိုး 25kgs, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ထုပ်ပိုး
တရုတ် HOT Sales ဆဋ္ဌဂံအခွံမာသီးတန်း 8 hex Nut Z ကို ...
အမြင့်ဆန့ Bolt က
Din 933/931 GB5781 / 5782/5783 Surface က Finish ကို: ရိုးရိုးအရောင် / က Black အောက်ဆိုဒ် / Galvnized နျ Standard: Din / GB ကို / BSW / ASTM အဆင့်: 8.8 / 10.9 / 12.9 အရွယ်အစား: အားလုံးအရွယ်အစား avaliable, စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား Accept
933/931 သွပ်ရည်စိမ် hex Bolt က Din
အမေရိကန်, ဥရောပ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာရှ Thread ၏တောင်ပိုင်းပင်လယ်မှ supply: အသုံးပြု Coare, Fine: အဆောက်အဦးစက်မှုလက်မှုစက် Customization: သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်လိုဂို (မင်းအမိန့်: ။ 25tons သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုး (မင်းအမိန့်: ။ 25tons) အရည်အသွေးပေါ်လစီ: အားလုံးစိတျအပိုငျးကို 100 ထုတ်လုပ် ရေကြောင်းမတိုင်မီ OQC ထံမှ% စစ်ဆေးခြင်း။
Bolt က ANC မှတဆင့်သပ် Anchor အဖြူရောင်သွပ်ပန်းကန် ...
Size: ငွေ / အဝါရောင်လက်မှတ်: M8-M20 အရွယ်အစား avaliable, စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားအရောင်လက်ခံသည်အီးထုပ်ပိုးဘာလဲ: ဘယ်လိုလစာမှ client ကိုရဲ့လိုဂိုနှင့်အတူ boxes တွေကို + အညိုရောင် ctn ထုပ်ပိုး, ဒါမှမဟုတ်ထုံးစံ ctn အဖြူ: 30% သိုက်, 70% ချိန်ခွင်လျှာ
Ltd. , Hebei Ruiye စွဲစေ Manufacturing Co. , မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, ကျနော်တို့သပ်ကျောက်ဆူး,3/ 4pcs ဒိုင်းလွှားကိုကျောက်ဆူး, frame ကိုကျောက်ဆူး, antiskid ငါးမန်းတောင်ကျောက်ဆူး, မျက်နှာကျက်ကျောက်ဆူး, Threaded လှံတံ, မူလီတွေနဲ့ခွံမာသီးကဲ့သို့စွဲစေအမျိုးမျိုးတို့ကိုထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများကိုပိုင်ဆိုင်သူကိုအင်အားကြီးကုမ္ပဏီ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာ, စုံလင်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အရှေ့တောင်အာရှ, တောင်ကိုရီးယား, အာဖရိက, ရုရှား, ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်ကဲ့သို့ထိုကဲ့သို့သောအရပ်တွင်ကြီးမြတ်ဝယ်လိုအားကောင်းနေသည်။ သင့်ရဲ့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်မျှော်လင့်။ ကျနော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းများနှင့်တပြိုင်နက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မင်မှုထာဝစဉျတပါလိမ့်မယ်။
hex Bolt ကအင်္ကျီလက် Anchor , ချဲ့ anchor Bolt က , ကျောက်ဆူး Bolt က,